Baarlamaanka Hirshabelle oo 5 sanno ka dhigay muddo-xileedka Baarlamaanka iyo madaxtooyada – Kalfadhi
Baarlamaanka Hirshabelle oo 5 sanno ka dhigay muddo-xileedka Baarlamaanka iyo madaxtooyada
December 23, 2020 December 23, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Baarlamanka Hirshabelle Dr. Cabdixakim Luqmaan Xaaji Muxumed oo uu wehlinaayo Gudoomiye kuxigenka 2aad Mudane Mahad Hassan Osman, ayaa maanta shir-guddoominayay kalfadhiga 1aad kulankiisa 10 ee Baarlamanka maamulka.
Ajandaha kulanka ayaa ahaa u codeynta wax-ka-badalka muddo-xileedka hay’adaha dastuuriga ee dowlad-goboleedka Hirshabelle, madaama xildhibaannada ay wax-ka-badal ku sameeyeen qodobada 33aad iyo 50aad ee dastuurka dowlad-goboledka Hirshabelle oo ka hadlaaya muddo Baarlamanka iyo madaxtooyada.
Xildhibaannada ayaa dood-dheer kaddib u codeeyay in muddo-xileedka Baarlamaanka iyo madaxtooyada laga dhigo 5 sannadood, halka markii hore uu ahaa 4 sannadood. Guddoomiyaha Baarlamaanka oo ku dhowaaqayay natiijada codeynta ayaa sheegay in 66 xildhibaan ay oggolaadeen, saddex ay diiday, halka hal mudane uu ka aamusay.
Todobaadkii hore Baarlamaanka Hirshabelle ayaa madaxweyne Cali Cabdulaahi Xuseen muddo 45 cisho oo hor leh ugu daray si uu u soo dhiso Golaha Wasiirada dowlad-goboleedka Hirshabelle.
Wasiirka maaliyada oo Baarlamaanka u sheegay “Anniga ma diidani dhismaha hay’adda iibka iyo qandaraasyada Qaranka”
Guddiga doorashooyinka heer federaal oo shaaciyay jadwalka doorashada ee Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka